Mahalala izay holazaina ny olona hendry. Ny olon-kendry mahalala raha tsy izany na tsia. - Anony - Quote Pedia
A ny malina dia olona iza no mahalala izay tokony holazaina na inona na inona toe-javatra rehetra. Ny traikefa azony azony avy amin'ny fiainana dia manolotra ny sainy amin'ny hafa hiandrasana ny toe-javatra rehetra sy hanao zavatra mifanaraka amin'izany. Zava-dehibe ny mianatra amin'ny fiainantsika ary manitsy ny fahaizantsika tamin'ny lasa.
Ilay mpanao fizika malaza sy manam-pahaizana malaza Albert Einstein dia nilaza indray mandeha fa ny olona tsy nanao fahadisoana dia mbola tsy nanandrana zava-baovao mihitsy. Ireo teny tsotra ireo dia tena midika hoe be dia be raha voadinika tsara. Tokony hanana ny saintsika manokana isika ary hampiasa azy io hanodinana ny toe-javatra araka ny safidintsika manokana.
Indraindray dia ilaina izany rehefa voahodidina olana maro isika, ary toa tsy mihena fotsiny ny vahaolana. Ny famakiana boky sy ny firesahana amin'ny resaka mahasoa miaraka amin'ny saina mamirapiratra dia hanampy antsika hitombo amin'ny fomba manokana sy amin'ny fiaraha-monina.
Tokony hanokana ny fotoana ilaintsika handinihana ny fanapahan-kevitsika manokana isika ary hieritreritra azy ireo tsy mitombina. Mba ho olona hendry iray, amin'ny voalohany dia mila mahay ampy ianao.
Ny fahatsapan-tena dia tsy vitan'ny hoe mitafy tsara ny fihazonana ivelany ivelany, fa avy amin'ny saina ihany koa ary manadio ny vatana sy ny fanahy manontolo. Mamirapiratra hatrany sy manampy ny olona hahasitrana ny olany amin'ny fivoaran'ny tsipika tsara mankany amin'ny fiainana.
Ny fisaintsainana sy ny torimaso tsara, miaraka amin'ny sakafo sy ny yoga mahasalama, dia azo hanaporofoana mahasoa amin'ny fitazomana ny tenantsika ho tony sy hamboarina mandritra ny fotoan-tsarotra. Aza adino fa ny olona dia tokony hifantoka mandrakariva amin'ny fiainana ny fiainany manokana fa tsy miaina ho an'ny hafa.
Ny fanapahan-kevitra sy ny safidin'ny fiainantsika dia tokony hotarihin'ny fomba fisainantsika sy ny saintsika manokana. Tsy tokony hanimba ny fiainantsika isika amin'ny fanarahana fotsiny ny didy sy ny hevitry ny hafa.
Marina na diso, ny fiainana dia amin'ny farany, hanampy antsika hatrany amin'ny tsara indrindra. Ny olona hendry dia hihaino bebe kokoa hatrany ary hiteny kely kokoa ary noho izany, dia mahalala ny fotoana hitenenana, ny fomba hitenenana, na ny miteny na tsia. Ny fahanginana dia tena fitaovam-piadiana mahery vaika fa tsy teny.
Olona tsara sitrapo
Quotes fampandrosoana manokana
Quotes Growth Personal
Quotes Inspirational Personal
Fandraisana anjara manokana
Quotes Smart Man Quotes
Quotes Smart Quotes
Olona miteny hendry
Hendry olona tsara
Indraindray, tsy tsapanao ny herinao manokana mandra-pahatongan'ny olona manararaotra ny fahalemenao. - Anonyme
Indraindray, tsy tsapanao ny herinao manokana mandra-pahatongan'ny olona manararaotra ny fahalemenao. - Anony…
Indraindray izay ilain'ny olona dia tsy saina tsara miresaka, fa fo mahari-po izay mihaino. - Anonyme
Biby ara-tsosialy ny olombelona. Mila olona iray izay azontsika hizara ny fihetseham-pontsika isika ary hizara ny fahatsapanay…
Mandeha antsasaky ny mandeha dia tsy mahita anao na aiza na aiza. Mandehana amin'ny fomba rehetra na aza mandeha mihitsy. - Anonyme
Raha mikasa ny tanjonao ianao, dia mila mandeha amin'ny fanoloran-tena tanteraka. Raha tsy ianao…
Alohan'ny hatory isan-alina, mamelà ny helok'izay rehetra, ary matory amin'ny fo madio. - Anonyme
Alohan'ny hatory isan-alina, mamelà ny helok'izay rehetra, ary matory amin'ny fo madio. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Aza manahy momba izay miresaka ao ambadiky ny lamosinao, fa ao aorianao izy noho ny antony. - Anonyme
Aza manahy momba izay miresaka ao ambadiky ny lamosinao, fa ao aorianao izy noho ny antony. - Tsy fantatra anarana…